के हो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ? - Deshko News Deshko News के हो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ? - Deshko News
के हो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ?
कार्यविधिअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले चार प्रकारका सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । उनीहरुले कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअनुसारको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन् ।